PVD သည် Physical Vapor Deposition ၏အတိုကောက်ဖြစ်သည် (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအငွေ့ဖြစ်ထွန်းခြင်း) အင်္ဂလိပ်လို. ၎င်းသည်ဗို့အားနိမ့်သုံးခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်, လေဟာနယ်အခြေအနေများအောက်တွင် high-current arc discharge နည်းပညာ, ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုခြင်းပစ်မှတ်အငွေ့ပျံခြင်းနှင့်အငွေ့ပျံစေသောအရာနှင့်ဓာတ်ငွေ့တို့ကိုစုပ်ယူသည်, အငွေ့ပျံစေသောအရာများနှင့်၎င်း၏တုံ့ပြန်မှုပစ္စည်းများကို workpiece ပေါ်တွင်ထည့်ရန်လျှပ်စစ်စက်၏အရှိန်ကိုသုံးပါ.
၁၉၇၀ နှောင်းပိုင်းတွင် PVD နည်းပညာပေါ်လာသည်, ပြင်ဆင်ထားသောရုပ်ရှင်သည်မြင့်မားမာကျောမှု၏အားသာချက်များရှိသည်, friction coefficient နည်းသည်, ကောင်းသော wear ခံနိုင်ရည်နှင့်ဓာတုတည်ငြိမ်မှု, etc.. မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများနယ်ပယ်၌ကန ဦး အောင်မြင်သောလျှောက်လွှာသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှကြီးစွာသောအာရုံကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်. စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီးယုံကြည်စိတ်ချရမှုမြင့်မားသောအပေါ်ယံပိုင်းပစ္စည်းများကိုတီထွင်နေစဉ်, ၎င်းတို့သည် cemented carbide နှင့်ကြွေဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများတွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအပေါ်ယံပိုင်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်. အလွှာလျှောက်လွှာသုတေသန.
CVD ဖြစ်စဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ,PVD လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ဆောင်မှုအပူချိန်နိမ့်သည်, ၎င်းသည်အပူချိန် ၆၀၀ below အောက်တွင် tool tool ၏ကွေးအားကိုမထိခိုက်ပါ; ရုပ်ရှင်၏အတွင်းပိုင်းအခြေအနေသည် compressive stress ဖြစ်သည်, carbide တိကျမှုနှင့်ရှုပ်ထွေးသောကိရိယာများအပေါ်ယံပိုင်းအတွက်ပိုသင့်တော်သောအရာဖြစ်သည်; PVD လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုမရှိပါ, ခေတ်သစ်အစိမ်းရောင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦး တည်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်, PVD အပေါ်ယံပိုင်းနည်းပညာကို cemented carbide end ကြိတ်များအပေါ်ယံပိုင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်, လေ့ကျင့်ခန်း, ခြေလှမ်းလေ့ကျင့်ခန်း, ရေနံအပေါက်လေ့ကျင့်ခန်း, reamers များ, ဘုံဘိုင်များ, indexable milling inserts များ, အထူးပုံစံကိရိယာများ, ဂဟေဆော်ကိရိယာများ, စသည်တို့.
PVD နည်းပညာသည်ရုပ်ရှင်နှင့် tool matrix material များအကြားချည်နှောင်အားကိုတိုးတက်စေသည်, သို့သော်အပေါ်ယံဖွဲ့စည်းမှုသည် TiN မှ TiC အထိတိုးတက်လာသည်, TiCN, ZrN, CrN, MoS2, TiAlN, TiAlCN, TiN-AlN, CNx, DLC, ta-C. အပေါ်ယံပိုင်း.
sputtering ပစ်မှတ်အတွက်, Shaanxi Zhongbeitai ပစ်မှတ်ကိုရွေးပါ!
အကြို: sputtering ပစ်မှတ်များ၏သန့်ရှင်းမှုအတွက် Integrated circuit လိုအပ်ချက်
နောက်တစ်ခု: Plansee သည် CIGS ဆဲလ်များ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးတက်စေရန် MoNa sputtering ပစ်မှတ်များကိုလွှတ်တင်သည်